Macalinka Xulka Argentina Oo Qiray In Koobka Aduunka Ay Tashanayaan Messi - Muxuu Ka Yiri Rajadooda %
Tababaraha xulka qaranka kubada cagta Argentina, ninka lagu magacaabo Jorge Sampaoli, ayaa wxuu sheegay in inkastoo uu isaga yahay macalinka, laakiin hogaamiyaha dhabta ah ee qaranka uu yahay laacibka Barcelona, ee Lionel Messi.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in Leo Messi uu yahay ciyaaryahanka aduunka ugu fiican sidaas darteeda uu awood uleeyahay inuu wax badan ka bedalo kulan walba, ayna isaga ku tiirsanaan doonaa marka la gaaro koobka aduunka.
“Wuxuu leeyahay masuuliyad badan, marka ay ka timaado in loo dhiibo waxybaaha dadka kale,” ayuu Jorge Sampaoli usheegay warbaahinta
“Hadii uu dareemayo wax wanaagsan, kadib kooxda waxay noqon doontaa kooxdiisa,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan wuxuu bedali karaa waxyaabo badan, isagoona dhinac kale urogi kara,” ayuu sii daba dhigay.
“Waa koox uu isaga leeyahay, waliba ka badan kuwa kale,” ayuu ku cel-celiyay, hogaamiyaha xulka qaranka kubada cagta ee Argentina.
Geesta kale, mar uu ka hadlay guud ahaan koobka aduunka ayuu Jorge Sampaoli qiray in Argentina ay kamid tahay xulalka loo saadaalinayo inay qaadaan koobkaan.
“Ma beeninayno inaan kamid nahay kuwa usharaxan inay ku guuleystaan, laakiin waq-xaadirkaan maskaxdeyda waxay diiradda saaraysaa liiska 23-ka ciyaaryahan ee aan soo xulan doono,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.